'Nhema Mirror' Inoisa Matatu Ep Mwaka Kuti Utenderere Pane Netflix Chikumi 5 - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau 'Nhema Mirirazi' Inogadza Matatu Ep Mwaka Kuti Udzike PaNetflix Chikumi 5
'Nhema Mirirazi' Inogadza Matatu Ep Mwaka Kuti Udzike PaNetflix Chikumi 5
by Timothy Rawles Dai 17, 2019
by Timothy Rawles Dai 17, 2019 867 maonero
Black Mirror iri kudzoka ku mumwe mwaka, uye senge yayo yechipiri nhepfenyuro, inongova nezvikamu zvitatu chete.
Iyo anthology yakarumbidzwa nekuda kwekugona kwayo kuzviitira mumwe munhu Twilight Zone muzera remagetsi. Kubata zvidzidzo senge pasocial media simba uye robhoti tech, Black Mirror ine pulse yayo pazvinhu zvinotyisa zvebhatani remagetsi rakatarisa nzanga.
Mukupera kwegore rapfuura, vakaenda mhando yemeta nehukama hwavo hwekudyidzana Bandersnatch iyo yakawana ongororo dzakavhengana maererano nenyaya yenyaya asi yakarumbidzwa, pamwe zvine mutsindo, yekuvandudza.
Mwaka wechishanu hausi kutsauka kubva pasiginecha fomati. Kusiyana-siyana anoti zviitiko izvi "zvinonyura zvakadzika munzvimbo yehungwaru hwekunyepedzera, tekinoroji yakanaka uye chokwadi chaicho."
Kunyangwe mwaka uri mudiki, kurasa hakuna.
Zvikamu nyeredzi Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Nyasha, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport naLudi Lin.
Kune avo vasingazive Black Mirror inobaya pane zvinogona kuitika kana tekinoroji ikatanga kudzora vanhu kungave nekufurira kana kuzviziva. Idzi ngano dzekunyevera dzakanyatso kusonwa mumupendero wesainzi fungidziro uye mukana.
Tarisa tarira pazasi: